Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.5.2 mpe ukungafani
Emva kokuba usushukumisele abaninzi abantu ukuba basebenze ingxaki yenzululwazi, uya kubona ukuba abathathi-nxaxheba bakho baya kuba neendlela ezimbini eziphambili: baya kutshintsha zombini kwizakhono zabo kunye nomgangatho wabo. Okokuqala impendulo yabaphandi abaninzi bezentlalo kukulwa nale nkunkuma ngokuzama ukukhupha abathathi-nxaxheba abasemgangathweni kwaye bazame ukuqokelela inani elichanekileyo lolwazi kubo bonke abashiye. Le yindlela engafanelekanga yokuyila iprojekthi yokubambisana yobuninzi. Esikhundleni sokulwa ne-heterogeneity, kufuneka uyihlose.
Okokuqala, akukho sizathu sokuba singabandakanyi abachaphazelekayo abanezakhono eziphantsi. Kwiifowuni ezivulekileyo, abathathi-nxaxheba abaphantsi abanakho iingxaki; Iminikelo yabo ayimonakalisi nabani na kwaye ayifuni naliphi ixesha lokuvavanya. Ukuqulunqwa komntu kunye nokusabalalisa iiprojekthi zokuqokelela idatha, ngaphezu koko, uhlobo olufanelekileyo lokulawulwa kwemfanelo luvela kwi-redundancy, kungekhona kwi-bar ephezulu yokuthatha inxaxheba. Enyanisweni, kunokuba kungabandakanyi abathathi-nxaxheba abaphantsi, indlela engcono ukubanceda benze igalelo elingcono, njengoko abaphandi abakwiBird benze.
Okwesibini, akukho sizathu sokuqokelela inani elichanekileyo lenkcazelo kumntu ngamnye. Ukuthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezininzi zentsebenziswano yokubambisana (Sauermann and Franzoni 2015) , kunye nenani elincinci labantu abanomdla wambi-ngamanye amaxesha kuthiwa yintloko yentloko- kwaye abaninzi abantu banomdla wancinci-ngamanye amaxesha kuthiwa ngumsila omde . Ukuba awuqokeleli ulwazi kwi-intloko yesonka kunye nomsila omde, ushiya iindidi zolwazi ezingafunyanwanga. Ngokomzekelo, ukuba i-Wikipedia yamkela i-10 kunye ne-10 kuphela ehleliweyo umhleli ngamnye, yayiza kulahleka malunga nama-95% ehleliweyo (Salganik and Levy 2015) . Ngaloo ndlela, ngeeprojekthi ezininzi zentsebenziswano, kukulungele ukuphakamisa i-heterogeneity kunokuba uzame ukususa.